ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် ယာယီဂေါပကမှ ဂေါပကအဖွဲ့သစ်သို့ ငွေကျပ် သန်း ၉၃ဝဝ ကျော် လွှဲ? - Yangon Media Group
ကျိုက်ထို၊ စက်တင်ဘာ ၁ဝ
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့နယ် ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် ဘဏ္ဍာထိန်းဂေါပကအဖွဲ့သစ်ကို စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ရွေးချယ်ခန့်အပ် တာဝန်ပေးမည်ဖြစ်ရာ လက်ရှိတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော ယာယီဂေါပကအဖွဲ့အနေဖြင့် ရန်ပုံငွေ ကျပ် သန်း ၉၃ဝဝ ကျော်ကို လွှဲပြောင်းအပ်နှံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယာယီဂေါပကအဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်ဝင်းလှိုင်က စက်တင်ဘာ ၁ဝ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
”ကျွန်တော်တို့ ယာယီဂေါပကအဖွဲ့အနေနဲ့ သက်တမ်း နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ စေတီတော်အတွက် ရန်ပုံငွေ ကျပ်သန်း ၉၃ဝဝ လောက်ကို လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မယ်။ ဒါတောင် ကျွန်တော်တို့ သက်တမ်း နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ အလှူငွေထဲက 11 KV ကာဗာကြိုးတွေ လဲလှယ်တပ်ဆင်တယ်။ ရင်ပြင်တော်အားလုံး ကျောက်ပြားခင်းတယ်။ ရေသန့်၊ အများသုံး အခမဲ့အဆင့်မြင့်သန့်စင်ခန်းတွေ တည်ဆောက်တယ်။ ကျန်တဲ့ငွေကို လွှဲပြောင်းအပ်နှံမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးကျော်ဝင်းလှိုင်က ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ အေးဇံ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာခင်ဆောင်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှမြင့်သန်း၊ ပြည်နယ်သာသနာရေးမှူး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန (မော်လမြိုင်ဌာနခွဲ)အပါအဝင်အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦး ပါဝင်သော ယာယီဂေါပကအဖွဲ့ကို ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃ဝ ရက်တွင် ဖွဲ့စည်း ပေးခဲ့ပြီး ယာယီဂေါပကအဖွဲ့အနေ ဖြင့် မူလဂေါပကအဖွဲ့ထံမှ ရန်ပုံ ငွေကျပ်သန်း ၁၆ဝဝ ခန့်သာ အပ်နှံငွေအဖြစ် ရရှိခဲ့သည်။
”ဂေါပကအဖွဲ့ ၁ဝ ဦး ရွေးတဲ့နေရာမှာ လျှို့ဝှက်မဲစနစ်နဲ့ ရွေးမယ်။ အရွေးခံကြတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဘောင်ထဲကနေ အရွေးခံကြပါ။ ဘောင်ကျော်ပြီး စည်းရုံးမှုတွေ လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းလေးမှ အခွင့်အရေးပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်သွားပါမယ်” ဟု မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအေးဇံက ပြောသည်။
ယခုအခါ ဆံတော်ရှင်ကျိုက် ထီးရိုးစေတီတော်ဂေါပကအသစ် ရွေးချယ်ရေးအတွက် လျှောက်ထားသူ ၁၄ ဦးရှိရာ ယင်းတို့အထဲမှ ၁ဝ ဦးကိုသာ လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး ငါးဦးကို သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့ ပူး ပေါင်းတာဝန်ပေးမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ဂေါပကအဖွဲ့သစ်တွင် အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦး ပါဝင်မည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းဖြစ်သည့် ကလေးဝ-ယာကြီး-မုံရွာလမ်း အဆင့်မြှင့်ရာ??